daabacaadaha buug-yaraha macaamiisheena
markii aad u cabatay bangigaaga, shirkad caymis ama hay’ad dhaqaale – laakiin weli aadan ku qanacsaneyn?
muddo intee le’eg ayey qaadanaysaa?
ku soo dalbashada waxyaabaha loogu baahan yahay buug-yaraha ee macaamisheena tusmooyinka shirkadaha wararka guddiga madax-banaan la socodsiinada farsamadeed Dib u eegyada sanadeedka Qorshayaasha shirkadda & misaaniyadaha
qormadaan ku jirta buug-yaraha macaamiisheena waxaa loogu talo galay in laga akhristo shaashadda. Halkii ay ku habboon tahay, waxaa meheradaha looga baahan yahay inay siiyaan macaamiishooda nuqulka adag ee rasmiga ah ee buug-yarahaan (ma ahan daabacaad lagala soo baxay boggaan internetka ah). macaamiishu qayb la daabacay waxay ka heli karaan tilfoonka ah 0300 123 9 123.
cabasho sameynta - tillaabooyinka koowaad dalbashada buug-yaraha farriin farsamo: u sheegidda macaamishaada waxa ku saabsan Adeegga Maaliyadeed ee Guddiga Madaxa Bannaan
SU’AALAHA HAD IYO GOOR LAYS - WAYDIIYO - markii loo cabanayo garsoorka
hooyga » daabacaadaha » buug-yaraha macaamiisheena
Garsooruhu wuxuu leeyahay awoodo rasmi ah oo uu ku xalliyo cabashooyinka u dhexeeya adiga iyo hay’adda ganacsi ee aadan hawsheeda ku qanacsaneyn.
Waxaan eegnaa xaqiiqooyinka jira, su’aalo weydiin sameynaa isla markaana go’aan ka gaadhnaa wixii dhab ka ah kiiska shakhsi kasta uu wato.
Haddii ay nala noqoto in hay’adda ganacsi kuula dhaqantay si caddaalad ah, waxaannu kuu sheegi doonnaa sababta ay ku dhacday. Laakiin haddii aan isku raacno in hay’addu wax khaldan ay sameysay, waxaan ku amri kareynaa inay isi saxaan.
Ka hor intaynaan dhibaatadaada guda gelin, isku day inaad adiga laftaadu xal kala gaadho hay’adda aadan hawsheeda ku qanacsaneyn.
Hay’adda ganacsi siddeed toddobaad ayey u haysataa inay ku xalliyaan cabashda iyaga iyo adiga u dhaxeysa. Haddii sided toddobaad ka dib weli aadan ku qancin sida wax u socdaan, waad na soo weydiisan kartaa inaan soo dhex galno. Waxaan kuu sharrixi doonnaa waxa aad qaban doontid ee xita taas. Naga soo wac taleefanka ah 0300 123 9 123.
Haddii hay’adda ganacsi siddeed toddobaad la siiyay waxna aysan qaban welina aadan ku qanacsaneyn, waad na soo weydiisan kartaa inaan soo dhex galno amuurtaas.
Haddii aad ku doonaysid macluumaadka qaab kan ka duwan sida farta indhooleyaashu wax ku akhriyaan, daabacaad ballaadhan ama cajalad dhageysi – ama luqad tan ka duwan – noo soo sheeg. Sida ugu wanaagsan ayaan kuu caawin doonnaa.
waxaan la xiriiri doonnaa hay’adda ganacsi si aan iyagana uga helno sheekada dhinacooda
u sheegaynaa adiga hay’adda ganacsi sida ay nala tahay.
Haddii ay nala noqoto in hay’adda ganacsi kuula dhaqantay si caddaalad ah, waxaannu kuu sheegi doonnaa sababta ay ku dhacday.
Haddii ay nala noqoto in hay’adda ganacsi kuula dhaqantay si khaldan isla markaana aad khasaartay, waxaan ku amri karnaa inay arimaha saxaan oo ay ku hagaajiyaan.
Cabashooyinka badankood heerkaan ayaan ku xallinaa. Haddii lagu hallin waayo, Dib ayaan u eegnaa cabashada isla markaana waxaan kuu sheegi doonnaa go’aankayaga kama dambaysta ah.
Taa macnaheeduna ma ahan inaad iska aqbashid go’aankayaga oo waxaad xor u tahay inaad maxkamad aaddid halkii aad nooga imaan lahayd. Laakiin kuma siin karno talo bixin xagga sharciga ah oo ku saabsan waxyaabaha lagaaga baahan yahay maxkamadaha iyo wixii xakamayn ah (tusaale ahaan, xadidnaanta xagga waqtiga ah).
Kiis walba si taxaddar leh ayaan u eegnaa – isla markaana waqtiga ay qaadaneysaa waa kala geddisan yahay. Waxay ku xirnaan kartaa:
Haa. Haddii aad la xallin weydo cabashadaada hay’adda ganacsi baf ahaantaadu, waxaa muhiim ah inaad noogu keentid annaga sida ugu dhakhsaha badan ee macquulka ah. Waxaad u haysataa taas ilaa lix bilood inaad ku keentid.
Qof kale waa kuu metali karaa cabashadaada – tusaale ahaan, xubin qoyskaaga ka tirsan, saaxiib ama Hay’adda Talo Siinta Muwaadinka. Laakiin weli waxaan kaaga baahan doonaa inaad saxiix ku dhufatid foomkayaga cabashada si ay noogu suurta gasho inaan ku hawl galno.
Maya. Uma baahnid caawimo takhasusle – tusaale ahaan, garyaqaanka ganacsiga ama shirkad maareynta cabashooyinka ah. Waxaan eegnaa xaqiiqooyinka aan ka helno cabasho walba – mana raacno sida wanaagsan ee aad u soo gudbinayso kiiskaaga. Waxaan door bidnaa inaan kaa maqalno adiga qawlkaaga.
Garsooruhu rasmi uma ahan sida maxkamadaha oo kale. Waxaan si guud u xallinaa cabashooyinka ku saleysan macluumaadka adiga iyo hay’adda ganacsi aad nagu siisaan, qoraal ahaanta iyo tilfoon soo dirista. Waxaan ku xallinaa cabashooyinka innagoon u baahan in la yeesho kulammo weji-ka-weji ah.
Adeeggayagu kuma kaafin karo haddii cabashaadu gaadho lacag ka badan £100,000 (£150,000 cabashooyinka na soo gaara laga bilaabo 1 Janaayo 2012) – waa taas taan u sheegi karno in hay’adda ganacsi iska bixiso. Waxaad sidoo kale haddii aad door bidaysid geysan kartaa cabashadaada maxkamad haddii aad doonayso in:
su’aalo kuu gaar ah aad dalbanaysid ama su’aalo is weydaarsi aad nala sameynayso annaga ama hay’adda ganacsi.
Haa. Waan eegnaa inta badan cabashooyinka ka yimaada meheradaha aadka u yar yar – haddii ay leeyihiin:
Maya. Taasi waa shaqada jaan-gooyeyaasha, sida Hay’adda Adeegyada Dhaqaale (FSA) iyo Xafiiska Ganacsiga Daacadnimada ah (OFT), inay qorto hadana hubiso in meheraduhu sharciga raacaan.
© Financial Ombudsman Service Limited | Casriyeynta ugu dambeyso waa 22/03/2012